Global Voices teny Malagasy » Venezoelà: Mitohy Ny Tsaho Momba Ny Fahasalaman’ny Filoha Chávez · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Marsa 2012 14:09 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Vidal Nandika (en) i Louella Mahabir, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Fahasalamàna, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika
Maro lavitra noho ny vaovao azo inoana ny tsahotsaho any Venezoelà, indrindra raha ny momba ny filoha no resahina. Hatramin'ny nahafantarana ny fisian'ny homamiadana tao aminy volana maromaro lasa izay dia tsy nitsahatra mihitsy ny hevitra sy ny fanombatombanana. Maro ny hafatra sy ny vaovao milaza tena ho manana loharanom-baovao marina saingy tsy fanta-piaviana  [es] fa efa tena lalina ny aretina, fa mandritra izany fotoana izany dia manome toky ny mpitondra tenin'ny fitondrana fa efa mimpody ny fahasalaman'i Hugo Chávez ka afa-manohy ny asa mahafiloha azy tsara izy.
Dia mandeha indray ny tombatombana isankarazany. Saingy, na izany aza, manjaka ny fisalasalana eo amin'ny resaka politika amin'ity fifidianana filoham-pirenena ho avy amin'ny vola oktobra 2012 ity sy taorian'ny dingana savaranonando n'ny [es] fifidianan'ny mpanohitra.
Ho an'ireo izay miròna amin'ny fe-potoana vaovao itondran'i Chavez ny firenena indray, dia ilaina ny teti-panorona vaovao ahafahan'ny filoha maka aina tsara, araka ny fanazavan'i Carola ao amin'ny hafatra “Chávez somos todos ” [es] (“Chávez daholo isika rehetra”):
Saingy tsy mavitrika loatra ny afa. Araka ny apetrak'i Naky, ao amin'ny “Con él muere todo ,”[es](“Miara-maty aminy ny zava-drehetra”) hafatra hamerenany indray ny resadresaka nataony tamin'ny mpivarotra gazety iray mpanohana mavitrika ny fitondrana.
Mandritra izany fotoana izany, Antonio Aponte, ao amin'ny Un grano de Maíz  [es](“Voan-katsaka”) manasongadina ny mahazava-dehibe ny fanohizana ny tolona na dia amin'ny sarotra indrindra aza:
Maro tamin'ny adihevitra no nifantoka tamin'ny fanjavozavon'ny filazana ofisialy momba ny fahasalaman'ny filoha. Miady hevitra ny olona raha mbola haharitra am-bolana, raha ho afa-manohy ny fampielezan-kevitra, raha afa-mitondra, raha manao kirin'antitra fotsiny. Wikileaks moa namoaka imailaka ihany koa  izay miaty filazalazana tsy dia tsara loatra, sady niely nanerana ny tranonkala taorian'ny filazana fa hanao fandidiana any Kiobà indray .
Manoratra toy izao ny mpanoratra ny The Devil's Excrement  [Dikin-devoly]:
Ary farany, fijery mitsikera avy any ivelany, ao amin'ny Twitter, avy amin'i @byciclemark :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/03/07/29831/
 tsy fanta-piaviana: http://www.lapatilla.com/site/2012/02/28/abc-de-espana-las-pruebas-medicas-a-chavez-diagnostican-un-cancer-mas-agresivo/
 dingana savaranonando: http://cnnespanol.cnn.com/2012/02/12/urgente-henrique-carpiles-rodoski-ganador-de-las-elecciones-primarias-en-venezuela/
 Wikileaks moa namoaka imailaka ihany koa: http://www.miamiherald.com/2012/02/28/2665052/wikileaks-doctors-of-venezuelas.html
 hanao fandidiana any Kiobà indray: http://www.msnbc.msn.com/id/38874418/ns/world_news-americas/t/factbox-venezuelan-president-hugo-chavez/